ယေဇကျေလ 43 (Myanmar/Burmese: Judson (1835)); Altar; Arcana Coelestia (Elliott translation) # 101České uživatelské rozhraní
ကမ္ဘာ ဦး ထွက်မြောက်ရာ ဝတ်ပြုရာကျမ်း တောလည်ရာ တရားဟောရာကျမ်း ယောရှုသည် တရားသူကြီးမှတ်စာ ရုသ ၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၂ ဓမ္မရာဇဝင် ၃ ဓမ္မရာဇဝင် ၄ ဓမ္မရာဇဝင် ၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂ ရာချုပ် z ဇရ နေဟမိ her သတာ ယောဘ ဆာလံ သုတ္တံကျမ်း ဒေသနာ ရှောလမုန်သီချင်း ဟေရှာယ ယေရမိ မြည်တမ်းစကား ယေဇကျေလ ဒံယေလ ဟောရှေ ယောလ အာမုတ် adi ဗဒိ ယောန မိက္ခာ Nahum ဟဗက္ကုတ် ဇေဖနိ ဟဂ္ဂဲ ဇာခရိ မာလခိ မMatthewဲ မာကု လုကာ ယောဟန် တမန်တော်ဝတ္ထု ရောမ ၁ ကောရိန္သု ၂ ကောရိန္သု ဂလာတိ .ဖက် ဖိလိပ္ပိ ကောလောသဲ ၁ သက်သာလောနိတ် ၂ သက် ၁ တိမောသေ ၂ တိမောသေ တိတု ဖိလေမုန် ဟေဗြဲ ဂျိမ်းစ် ၁ ပေတရု ၂ ပေတရု ၁ ယော ၂ ယော ၃ ယောဟန် ယုဒ ဗျာဒိတ်ကျမ်း
1 ထိုနောက်မှ အရှေ့ဘက်သို့ မျက်နှာပြုသော တံခါးဝသို့ တဖန်ခေါ်သွား၏။
2 ဣသရေလအမျိုး၏ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခဘုရားသခင်ဘုန်းတော် သည် အရှေ့မျက်နှာမှလာလာ၍၊ အသံအသံသည် သမုဒ္ဒရာ သကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ရေရောင်ခြည်တော်အားဖြင့် မြေမြေတပြင်လုံး လင်း၏။
3 ငါမြင်မြင်သော ရူပါရုံသည် မြို့တော်မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးခြင်း ငှါ လာလာသောအခါ၊ ငါမြင်မြင်သော ရူပါရုံနှင့်တူ၏။ ထင်ရှား သောအရာတို့သည် ခေဗာမြစ်မြစ်နားမှာ ငါမြင်မြင်ဘူးသော အရာများကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ ငါသည် ပြပ်ဝပ်လျက်နေ၏။
4 ထာဝရဘုရားဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် အရှေ့ဘက် သို့ မျက်နှာမျက်နှာပြုသော တံခါးလမ်းလမ်းဖြင့် အိမ်အိမ်တော်ထဲသို့ ဝင်ဝင်တော်မူ၏။
5 ထိုအခါ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့ကိုချီလျက် အတွင်း တန်တိုင်းထဲသို့ ဆောင်သွား၍၊ ထာဝရဘုရားဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် တအိမ်အိမ်လုံးကို ဖြည့်တော်မူ၏။
6 အရင်လူလူသည် ငါ့အနားမှာရပ်နေရပ်နေလျက်၊ အိမ်အိမ်တော်ထဲက ငါ့အား မိန့်တော်မူသောအသံကို ငါကြားကြား သည်ကား၊
7 အချင်းလူသားသား၊ ဤအရပ်သည် ငါ့ပလ္လင်တည်ရာ အရပ်၊ ငါ့ခြေဘဝါးခြေဘဝါးနင်းမြဲအရပ်၊ ဣသရေလအမျိုးသားသား တို့တွင် အစဉ်အမြဲအစဉ်အမြဲငါ့နေရာနေရာအရပ် ဖြစ်၏။ ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်များနှင့် အမျိုးသားသားတို့သည် မှားယွင်းခြင်းအား ဖြင့်၎င်း၊ ရှင်ဘုရင်၏အသေကောင်အားဖြင့်၎င်း၊ မြင့်ရာ အရပ်တို့၌ငါ၏နာမတော်မြတ်ကို နောက်တဖန် မရှုတ်ချရကြ။
8 သူတို့တံခါးခုံကိုလည်း ငါ့တံခါးခုံအနားမှာ၎င်း၊ သူတို့တိုင်ကို လည်း ငါ့တိုင်အနားမှာ၎င်း တည်စိုက်လျက်၊ ငါနှင့်သူတို့စပ်ကြားမှာ နံရံနံရံတခတည်းသာရှိလျက်၊ သူတို့ ပြုမိသော စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အမှုတို့ဖြင့်၊ ငါ၏နာမတော် မြတ်ကို ရှုတ်ချသောကြောင့်၊ ငါသည်အမျက်ထွက်အမျက်ထွက်၍ သူတို့ကို ဖျက်ဆီးပြီ။
9 ယခုမူကား၊ သူတို့မှားယွင်းခြင်းအမှုများနှင့် ရှင်ဘုရင်၏အသေကောင်များကို ငါမှဝေးစွာ ပယ်ရှား ကြစေ။ ငါသည်လည်း သူတို့တွင် အစဉ်အမြဲအစဉ်အမြဲနေမည်။
10 အချင်းလူသားသား၊ ဣသရေလအမျိုးသားသားတို့သည် ကိုယ်ဒုစရိုက်အပြပြစ်ကြောင့် ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါ အိမ်အိမ်တော်ကိုပြပြလော့။ အိမ်အိမ်တော်ပုံပုံကို သူတို့ တိုင်းကြ စေလော့။
11 သူတို့သည် ကိုယ်ပြပြုမိသောအမှုများကြောင့် အမှန်ရှက်ကြောက်လျှင်၊ အိမ်အိမ်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ထွက်ရာ ဝင်ရာတံခါးဝများ၊ ကျင့်ရသမျှသော ထုံးစံများ၊ စီရင် ထုံးဖွဲ့ချက်တရား အလုံးစုံတို့ကိုပြပြလော့။ သူတို့သည် ထုံးစံ များနှင့် စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်အလုံးစုံတို့ကို ကျင့်စောင့်စေခြင်း ငှါ သူတို့ရှေ့မှာ ရေးရေးထားလော့။
12 တောင်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတည်သော အိမ်အိမ်တော်၏ ကရားဟူမူကား၊ အိမ်အိမ်တော်နယ်နိမိတ်နယ်နိမိတ်ရှိသမျှတို့သည် အလွန်သန့်ရှင်းရကြမည်။ ဤရွေ့ကား၊ အိမ်အိမ်တော်၏ တရားပေတည်း။
13 ယဇ်ပလ္လင်ယဇ်ပလ္လင်အတိုင်းအရှည်ကား၊ သံတောင်ဖြင့် တိုင်းလျှင်၊ ဘိနပ်အမြင့်တတောင်၊ အကျယ်တတောင်၊ ပတ်လည်အနားပတ် အကျယ်တထွာရှိ၍၊ ယဇ်ပလ္လင်ယဇ်ပလ္လင် ပြင်ဘက်၌ တည်ရ၏။
14 အောက်အထစ်သည် မြေမြေနှင့်နှစ်နှစ်တောင်ကွာ၍ အကျယ်တတောင်ရှိရမည်။ ငယ်သောအထစ်နှင့် ကြီး သောအထစ်သည် လေးလေးတောင်ကွာ၍ အကျယ်တတောင် ရှိရမည်။
15 ယဇ်ပလ္လင်အမြင့်သည်လည်း လေးလေးတောင်ရှိရ မည်။ ဦးချိုလေးလေးချောင်းလည်း တက်ရမည်။
16 ယဇ်ပလ္လင်သည် စတုရန်းစတုရန်းဖြစ်၍၊ အလျား တဆယ်နှစ်နှစ်တောင်၊ အနံလည်း တဆယ်နှစ်နှစ်တောင် ရှိရမည်။
17 အောက်အထစ်သည်လည်း စတုရန်းဖြစ်၍ အလျား တဆယ်လေးတဆယ်လေးတောင်၊ အနံလည်းတဆယ် လေးလေးတောင်ရှိရမည်။ အနားပတ်သည်လည်း အကျယ် တထွာရှိရမည်။ ဘိနပ်သည်ယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်၌ တတောင်ထွက်၍၊ တက်ရာလမ်းသည် အရှေ့သို့ မျက်နှာ ပြုရမည်။
18 တဖန်အချင်းလူသားသား၊ အရှင်ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူ သည်အတိုင်း၊ မီးရှို့ရာယဇ်ကိုပူဇော်၍ အသွေးသွေးကိုဖျန် ဘို့ရာ၊ ယဇ်ပလ္လင်ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်သောနေ့နေ့၌ ကျင့်ရသောတရား ဟူမူကား၊
19 အမှုတော်ကိုဆောင်၍ ငါ့ထံသို့ ချဉ်းကပ်သော လေဝိအမျိုး၊ ဇာဒုတ်သားသားယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အား အပြစ် ဖြေရာယဇ်ဘို့၊ ပျိုသောနွားနွားထီးတကောင်ကို အပ်ရမည်။
20 နွားအသွေးသွေးအချို့ကိုယူ၍ ယဇ်ပလ္လင်ဦးချို လေးလေးချောင်း၊ အထစ်လေးလေးထောင့်၊ အနားပတ်ကိုလူးသော အားဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရမည်။
21 အပြစ်ဖြေရာအပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ဘို့နွားကောင်ကို ယူ၍ သန့်ရှင်းရာဌာနပြင်၊ ဗိမာန်တော်အတွင်းတွင် ခန့်ထားသော အရပ်၌မီးရှို့ရမည်။
22 ဒုတိယနေ့နေ့၌လည်း အပြစ်မရှိသော ဆိတ်သငယ်ဆိတ်သငယ် ကို ယူ၍၊ အပြစ်ဖြေရာအပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ဘို့ပူဇော်ရမည်။ ယဇ်ပလ္လင်ယဇ်ပလ္လင် ကို နွားအသွေးနှင့်သန့်ရှင်းစေသကဲ့သို့ ဆိတ်ဆိတ်အသွေး နှင့် သန့်ရှင်းစေရမည်။
23 ထိုသို့ယဇ်ပလ္လင်ကို သန့်ရှင်းစေပြီးသည်နောက်၊ အပြစ်မရှိ၊ ပျိုသောနွားနွားထီးနှင့် အပြစ်မရှိသော ဆိတ်ထီးကိုထာဝရဘုရား ရှေ့တော်၌ပူဇော်ရမည်။
24 ယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဆားကိုတင်လျက်၊ ထိုယဇ်ကောင်တို့ကို ထာဝရဘုရားဘုရားအဘို့ မီးရှို့၍ ပူဇော် ရမည်။
25 ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး တနေ့နေ့တနေ့နေ့လျှင်၊ ဆိတ်ဆိတ်တ ကောင်ကို အပြစ်ဖြေရာအပြစ်ဖြေရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်ရမည်။ အပြစ် မရှိ၊ ပျိုသောနွားနွားထီးတကောင်နှင့် သိုးသိုးထီးတကောင်ကို လည်း ပူဇော်ရမည်။
26 ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ယဇ်ပလ္လင်ယဇ်ပလ္လင်ကို သန့်ရှင်း စင်ကြယ်စေ၍၊ ကိုယ်ကိုလည်း ယဇ်ပုရာဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားရကြမည်။
27 ခုနစ်ရက်စေ့သောနောက် အဋ္ဌမနေ့နေ့၌၎င်း၊ ထိုနေ့နေ့မှစ၍၎င်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ယဇ်ပလ္လင်ယဇ်ပလ္လင် ပေါ်မှာ သင်တို့မီးရှို့ရာယဇ်များနှင့် မိဿဟာယယဇ်များ ကို ပူဇော်ရကြမည်။ ငါသည်လည်း၊ သင်တို့လက်ခံ မည်ဟု အရှင်ထာဝရဘုရားဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
ထွက်မြောက်ရာ 25:8, 22, 27:1, 29:14, 36, 37, 42, 45, 40:34, 35
ဝတ်ပြုရာကျမ်း 1:5, 2:13, 4:23, 26, 8:14, 15, 33, 9:1, 4
၃ ဓမ္မရာဇဝင် 8:13
၄ ဓမ္မရာဇဝင် 16:4, 14
၁ ရာဇဝင်ချုပ် 28:2
၂ ရာချုပ် 4:1
ဆာလံ 68:17, 93:5, 99:1
ဟေရှာယ 6:3, 29:1, 60:1
ယေရမိ 3:17, 17:12, 33:18
ယေဇကျေလ 1:24, 3:5, 12, 14, 23, 5:11, 12, 13, 8:4, 6, 9:10, 10:4, 19, 22, 11:23, 16:61, 20:40, 37:26, 28, 40:4, 5, 46, 42:20, 44:1, 2, 5, 45:2, 18, 19
ဟဗက္ကုတ် 3:3, 4
ဇာခရိ 13:2, 3
၂ ကောရိန္သု 6:17
ဗျာဒိတ်ကျမ်း 1:15, 18:1, 21:3
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals to the Lord. Mountains represent the Lord becase they are high, and we must raise our thoughts above worldly things when "talking" with the Lord. An altar isasmall artificial mountain but when used in worship can call to mind this raising of thought, and the fire and smoke is sent up which symbolically is sent to the Lord. Most altars were made from unhewn stones. Stones represent truths and stones that have not been shaped by men represent truths from the Word, truths that have not been adulterated. The clean beasts represent good things, charitable acts done because they are right, and the clean birds represent thoughts about doctrine and actions, and about what is right. So presenting these things is an acknowledgment that we have them from the Lord, and thank Him for them.
In the Israelitish Tabernacle, the Altar of burnt offering represented the acknowledgment of good and the altar of incense that of truth. For this reason this larger altar, which was outside by the door, was made of brass which signifies natural good, and the altar of incense was made of gold which signifies love to the Lord from whom comes truth.
(Odkazy: Arcana Coelestia 921, 1298, Arcana Coelestia 1298 , , 10177)
Arcana Coelestia # 101
101. The Lord is 'the east'. This too is clear from several places in the Word, as in Ezekiel,
He brought me to the gate, to the gate facing the way of the east. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and His voice was like the voice of many waters, and the earth shone with His glory. Ezekiel 43:1-2, 4.
The Lord's being 'the east' was the reason for the sacred practice in the Jewish representative Church, before the Temple was built, of facing eastwards when praying.
Arcana Coelestia 1250, 1291, 1451, 1593, 2441, 2702, 3708, 3762, 3900, 4288, 5215, 7679, 9341, 10235